एपी - कान्तिपुर समाचार
एपीका लेखहरु :
रोनाल्डो रियल फर्किने हल्ला
रियल म्याड्रिडका प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोट्टीले क्लबले क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई फेरि अनुबन्ध गर्ने सम्भावना अस्वीकार गरेका छन् । म्याड्रिड फर्किने हल्ला चलिरहेका बेला रोनाल्डो आफैंले पनि स्पेनी महारथीसँग आफ्नो अध्याय लेखिसकेको बताएका छन् ।
अफगानी फुटबलरको रोदन
भयभीत फोन कल र भ्वाइस म्यासेजको माध्यमबाट खालिदा पोपलले अफगानी महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीहरूको याचना सुनिरहेकी छन् । दुई दशकपछि तालिवानीले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँका महिला खेलाडीमा डर स्थापित भएको छ । उनीहरू रुँदै सहयोग मागिरहेका छन् । जसले फोन गर्छन्, उनीहरूलाई पोपलले आफ्नो घरबाट भाग्न सल्लाह दिइरहेकी छन् । तर, जाने कहाँ ?
प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन : ठूला चार क्लबबीच होड
म्यानचेस्टर सिटीले भर्खरै खेलाडी स्थानान्तरणमा कीर्तिमान बनाएको छ । सायद चेल्सीले पनि यस्तै काम गर्दै छ । म्यानचेस्टर युनाइटेडले आफ्नो कमजोरी रहेका दुई स्थानमा खेलाडी भर्न १५ करोड डलर खर्च गरिसकेको छ । अनि लिभरपुल ? यो क्लब सायद त्यस्ता पुराना खेलाडीलाई स्वागत गर्नमै खुसी देखिएको छ, जसले पछिल्लो सिजन चोट बोकेको थियो । धेरै कारण विश्लेषण गरेर भन्न सकिन्छ, यसपल्ट पनि त्यही चार टिमबीच उपाधिको होड हुनेछ । तिनैले पछिल्लो सिजन पनि शीर्ष चारको स्थान हात पारेका थिए ।
जापानी प्रधानमन्त्री सुगाले भने– ‘धन्यवाद जनता’
जापानका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाले कोरोना भाइरस महामारीको कठिनाइबीच देशमा सुरक्षित तबरबाट ओलम्पिक आयोजना गर्न सहयोग गर्ने आफ्ना नागरिकलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
बेलारुसकी ओलम्पिक स्प्रिन्टरले आफ्नो देशको निरंकुश सरकारबाट असुरक्षा रहेको भन्दै पोल्यान्डमा शरण लिने तयारी गरेकी छन् । आफ्नै टिम व्यवस्थापनको आलोचना गरेपछि यी खेलाडीलाई बेलारुसी ओलम्पिक अधिकारीले प्रतियोगिता खेल्न नदिई जबर्जस्ती घर फिर्ता पठाउने प्रयास गरेका थिए ।
पोर्चुगाली मिडफिल्डर सेकाको एक मात्र गोलमा फ्रान्सेली लिग च्याम्पियन लिलेले कप विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) लाई आइतबार १–० ले हराएर च्याम्पियन्स ट्रफी जितेको छ ।
कोरोनाविरुद्ध लडेका नर्स
जाभेद फोरोघीले थुप्रै रात कोरोनाका गम्भीर बिरामीको हेरचाहमा बिताए । श्वास फेर्न कठिन भएका बिरामीलाई बचाउन उनले सकेको सबैथोक अपनाए । उनी आफैं पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भए । निको भएपछि पनि काममा जान सधैं डर भइरह्यो । कतै फेरि संक्रमित हुने हो कि ?
ब्राजिली भारोत्तोलक रेयस डोपिङमा
ब्राजिल ओलम्पिक कमिटीले आफ्ना हेभीवेट भारोत्तोलक फर्नान्डो रेयसलाई डोपिङ परीक्षणमा असफल भएपछि निलम्बन गरेको छ । उनले टोकियो ओलम्पिक खेल्न नपाउने भएका हुन् । १ सय ५ केजीमाथि तौलसमूहमा उनलाई ओलम्पिक पदकको दाबेदार मानिएको थियो ।
ओलम्पिक भिलेजभित्रै भेटिए संक्रमित
टोकियो ओलम्पिक भिलेजभित्र रहेका एक जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको पुष्टि भएको छ । ३२ औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक हुन एक साता बाँकी रहँदा भिलेजभित्रै संक्रमण देखिएको व्यक्ति खेलाडी भने नरहेको आयोजक कमिटीले शनिबार जानकारी दिएको छ ।
युरोमा ३२ टिम पुर्‍याउने युईएफएको योजना
युरो २०२० को सफलताबाट उत्साहित युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) ले भविष्यमा प्रतियोगिता ३२ टिमको बनाउने सोच अगाडि सारेको छ ।